८ हप्ताको शिशु बोल्न थालेपछि दुनियाँ चकित, (भिडियो सहित) – Krazy NepaL
May 5, 2021 301
एक शिशुले सामान्यतयाः ६ महिनामा बोल्न थाल्छन् । कतिपयलाई त वर्षदिन पनि लाग्न सक्छ । तर अहिले बाहिर आएको एक खबरले सबैलाई चकित पारेको छ । ८ हप्ताको शिशुले आफ्नो पितालाई हेलो भनेर सबैलाई अचम्मित पारिदिएका छन् ।
चार्ली नाम दिइएको उक्त बालक सबैभन्दा कम उमेरमा बोल्ने संसारको पहिलो बच्चाको रुपमा हेरिएको छ । बेलायतका निक र क्यारोलिन आफ्नो सन्तानको पहिलो बोली यति कम उमेरमा सुन्दा निकै उत्साहित भएका छन् । डेलीमेललगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित भएको भिडियोमा निकले आफ्नो छोरालाई हेलो भनिरहेका छन् ।
बच्चाले आफ्नो बुवाको बोली फर्काउन निकै कोसिस गर्छ । पछि बालक हेलो भन्न सफल हुन्छन् र पटक पटक दोहोराउँछ । भिडियो बालककी आमा क्यारोलिनले खिचेको बताइएको छ
क्यारोलिन भन्छिन्, ‘हामी उसको भिडियो बारम्बार हेरिरहन्छौं । हामीलाई गर्वको अनुभव भइरहेको छ । हाम्रो छोरा यो उमेरमा पनि बारम्बार मुस्कुराइरहन्छ । साधारणतया बच्चा १० देखि १४ महिनाको उमेरमा बोल्न सुरु गर्छन् । हाम्रो अर्को छोराले नै ६ महिनामा बोल्न सुरु गरेको थियो ।
केही सोसल सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यसलाई जादु बताइरहेका छन् भने कति निकै आश्चर्यमा परेका छन् । यस्तै, केही मानिसहरुले भने कम उमेरमा बोल्ने बच्चाको दाबी गरिएको माथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
Prevजस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे तपाईलाई प’छु’तो हुनेछ !
Nextकोरोना संक्रमणबाट ५८ जनाको मृत्यु, ८६५९ मा संक्रमण पुष्टि